Qaxootiga oo ka baaqda daryeelka caafimaad - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxootiga oo ka baaqda daryeelka caafimaad
Soogalootiga iyo dar-yeelka caafimaad
La daabacay fredag 11 december 2015 kl 08.11
Qaxootiga dalka yimaada ayaan bar ka xaadirin baarista caafimaadka guud ee lagu casumo iyo sidii dar-yeelkooda caafimaad loo hubin lahaa, sida ku cad baaritaan ay middaa ku sameeysay laanta wararka ee idaacadda Ekot.
Mohammed Sharkan wuxuu muddo siddeed bilood ah ku dhaqnaa xera-qaxooti oo ku taala nawaaxiga degmada Varberg. Isagoona sheegay in in aaney jirin qaxooti xerada ku nool ee tijaabada caafimaadka maray.
– Cid i waydiisay ma jirto inaan dooneyo inaan dhakhtar la kulmo, ma jirto cid halka deggan ee la weydiiyey iney doonayso dhakhtar inay la kulanto, sida uu sheegay.
Sababta loola jeedo baaritaanka caafimaad ee lagu casumo soo galootiga, ahna mid aan khasab ahayn ayaa loola jeedaa sidii wax looga ogaan lahaa loogana hor-tegi lahaa in cudurrada faafa sida cudurka qaaxada iyo weliba in soo-galootiga lagu war-geliyo habka hayadaha caafimaadka ee dalku u howl-galaan.
Kristian Svenberg waa dhakhtar in muddo ah ka howl-geli jiray goobaha caafimaadka, isla-markaana sannooyinkii u dambeeyey ku howlanaa goob caafimaad oo ku taala magaalada Göteborg ee loogu talo-galey sidii daryeel caafimaad iyo baaritaanka caafimaadka loogu sameeyn lahaa ajaaniibta dalka ku cusub. Iyadoona uu maamulka Göteborg bilaabay muddo iminka dhowr bilood laga joogo in goobaha ey ku dhaqan yihiin loogu tago goobaha soo-galootiga iyo dhallaanka keli-nimada dalkan ku yimaada iyo weliba sidii loo gaarsiin lahaa dar-yeelka iyo tijaabada caafimaad, sida uu sheegay. Waa maxay haddaba howlaha dhakhtar Kristian Svenberg:
- Howlaha aan qabto waxay inta badan ku saab-san yihiin dar-yeelka caafimaada ee dadyoowga dalka sharciga ku heley ee ku jira marxaladda la qabsiga bulshada, kuwaasina oo uu noo soo diro xafiiska shaqada – Arbetsförmedling. Howshayda labaad ayaa ah sidii aan tijaabo dhanka dar-yeelka caafimaadka uga qaadi laheyn ajaaniibta dalka ku cusub eyna ka mid yihiin dhallin-yarada keli-nimada dalka ku yimaada iyo sidoo kale dhallaanka/caruurta, sida uu sheegay.
Baaritaanno ey maamullada degmooyinka iyo ururka maamullada degmooyinka iyo gobollada ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno (SKL) ku sameeyeen amuurtaa ayey ku caddaatay in xaaladdu sidaaba ahayd dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey. Waana fikir uu la qabo dhakhtar Kristian Svenberg.
Svenberg ayaa sidoo kale sheegay in badankood soo-galootiga dalka yimaadaa yihiin dad caafimaadkoodu wanaag-san yihiin, iyadoona ey qaxootiga xanuun-sani ku nagaadaan waddammada jaarka la ah waddammadood:
- Haddii aan dul mar guud ka bixiyo qaxootiga aan la kulanno badankood waa dad oogiyan caafimaad qaba, hase yeeshee ey qaar badan oo ka mid ahi la soo gudboonaadeen dhibaatooyin maskixiyan, mid jir dil iyo wixii la mid ah. Hase yeeshee ey ku yar yihiin kuwooda qaba cudurrada faafa sida qaaxada iyo wixii la mid ah.
Baaritaanka laanta wararka idaacadda ee Ekot amuurtaa ku sameeysay ayaa sidoo kale muujinaya in hayadaha caafimaadka ee gobolladu dhibaatooyin ku qabaan sidii war-bixinta u yeeridda baaritaanka caafimaad loo gaarsiin lahaa soo-galootiga, maadaama uu guur-guurkoodu badan yahay.
Halka uu dhakhtar Kristian Svenberg sheegay in ey kaga wanaag-sanaan lahayd, isla-markaana laamaha dar-yeelka caafimaad qaarkood bilaabeen iney farriin dhanka mobiilka ah ugu diraan ballanta. Hase yeeshee ey jiraan soo-galooti si ula kac ah uga dhuumaaleeysta baarista caafimaad, iyagoona shaki ka qaba inuu saameeyn ku yeesho go’aanka dalabkooda magan-gelyo-doon, sida uu sheegay Kristian Svenberg.
Isha/ Radio Sweden, Ekot